I-Central Comedy yamemezela ukuba uTvorvor Noah wayeza kuthatha njengomkhosi we -Daily Show emva kokuba uJon Stewart ashiya umboniso ekupheleni kuka-2015 okanye ngasekuqaleni kuka-2016.
UNowa, 31, ungumculi waseMzantsi Afrika, umculi nomlobi owayebe ngumvakalisi ohlala ehleli kwi-Stewart's show kusukela ebonakala okokuqala ngoDisemba 2014. Nangona unenkwenkwezi ebonakalayo eMzantsi Afrika, uNowa akayaziwa kakhulu eUnited States kwaye yayiyinto ekhethiweyo yokumkela into eye yaba yinto ebonakalayo kunye neyobalulekileyo ye-TV yaseMelika.
Kwiiyure ezingama-48 zesibhengezo somnatha, uNowa wayesele esenkingeni ngee-tweets ayezithumele ngaphaya kweminyaka ebezibambileyo zazingcolisa abafazi, amaYuda kunye nabancinci. Unina kaNowa unesiqingatha samaYuda, umnyama omnyama waseMzantsi Afrika, kunye noyise umhlophe kunye neSwitzerland-German.
"Ukunciphisa iimbono zam kwiintlanzi ezingazange zenze umhlaba akubonakalisi okwenene ngomlingiswa wam, okanye ukuziphendulela kwam nje njengomculi," wathetha ngeempendulo ngokugxeka.
Ummi waseMzantsi Afrika onetalente likaNowa uya kuba neengxaki ezinzulu zokuhlawula i-visa evela kubasebenzi base-US abafudukayo-mhlawumbi i-P visa esetyenziswa rhoqo kubadlali, abazonwabisa okanye abadlali bezemidlalo.
Uninzi lwabadlali bebhola bebhola ye-baseball, umzekelo, beza eUnited States ukuya kwi-visa ye-O-1 okanye ye-P-1. I-visa yilabo abavela kwamanye amazwe ababonisa "amandla angaphezu kwamandla" kwintsimi, umzekelo, isayensi, ubugcisa okanye imidlalo yezemfundo.
I-visa ngokuqhelekileyo yinkwenkwezi yeenkwenkwezi zonke.
Emva kokumiselwa kwiCommedy Central, kufuneka kube yinto elula ukuba uNowa afumane ikhadi eliluhlaza aze afumane ukuhlala ngokusisigxina komthetho. Amagosa aseMelika afudukayo akulungele ukunika abantu belizwe langaphandle iitalente ezingavamile eziza kubangela uqoqosho lwe-US, kunye nenkcubeko kunye nobugcisa.
Abantu baseMzantsi Afrika abasemgangathweni abafikile ekugqibeleni bafumana ubuhlanga babo base-United States kubandakanya ukurekhoda inkwenkwezi uDave Matthews, umdlali we-Academy Award-winning u-Shakira Theron nomqambi / usomabhizinisi uEon Musk. Abanye abantu baseMzantsi Afrika abaziwayo abahlala iminyaka emininzi e-United States baquka i-golfer uGary Player, abadlali be-tennis uCliff Drysdale noJohan Kriek, uqoqosho uRobert Z. Lawrence, umculi we-embeth Davidtz kunye nabaculi uTrevor Rabin noJonathan Butler.
Abantu baseMzantsi Afrika baqala ukufudukela e-United States ngasekupheleni kwekhulu le-19 kwaye namhlanje, ngokutsho kwe-US Census Bureau, malunga nabahlali abangama-82 000 base-US balandelelanisa imvelaphi yabo kwilizwe elisezantsi kweli zwekazi. Ngeeminyaka yama-1980 neye-1990, amawaka abantu baseMzantsi Afrika babalekela eUnited States ngezizathu zezopolitiko, basinda kwiimbambano zombambano kwilizwe labo ngenxa yobandlululo nokuhlukana kohlanga.
Abaninzi abamhlophe baseMzantsi Afrika, ngokugqithiseleyo amaAfrikaners, basuka ngenxa yokwesaba kwezinto eza kwenzeka xa ukutshintshwa okungenakugweba kwamandla kubantu abamnyama kwenzeka phantsi kukaNelson Mandela. Uninzi lwabantu baseMzantsi Afrika abahlala e-US namhlanje ngabamhlophe belifa leYurophu.
Ngokumalunga nama-US amagosa okufudukela kwamanye amazwe, ii-visa ezingabangaphandle zicwangciswe kwiiNgxenye ze-Visa kwiintlanganiso ezintathu zase-United States eMzantsi Afrika e-Johannesburg, eKapa naseThekwini.
I-Consulate yase-US yaseJongene yenza iinkqubo zeeVasta eziFundisayo kwi-US I-Embassy yase-US ePitoli ayinikezeli nkonzo nayiphi na i-visa. Abafake izicelo kwiifas kwindawo yasePitoli kufuneka bafake isicelo kwi-Consulate yaseGoli.
Ingaba ngumPhambukeli oQongiweyo wokuqala okanye wesiBini sesiBini?
KwiKota yeGreen yokufuduka
Ziziphi Iindlela Zokufuduka?
Ziziphi Iimathuba Amanqaku Okunqoba ILotter Green Card?
Nasim Pedrad, Ivela e-Iran ukuya kwi-SNL
Indlela Abafuduki Abafumana Ngayo AmaKlasi aseNgesi
Iincwadana ezimnandi zeHarry Potter
Igama eliqhelekileyo lesiFrentshi: Un Bouchon
Romani Magic kunye neNkcubeko
Isihloko soKhetho lwakho: Iingcebiso zoVavanyo lweeNcwadi eziqhelekileyo zeNketho # 7
Yintoni Eyesibini Ngosuku Lwelishumi?
Ukubulawa kukaHelen Jewett, iMedia Sensation ka-1836
Iminyaka Yokufunda Ephakathi Kwabantwana
Ukuqonda iNdlela yokuQinisekisa kwiNdebe yeHlabathi
Iingqapheli ezingama-20 ezifundisa iiNkxaso Indlela yokuHlonipha kwaye uzuke